Askeri 17 maalmood ka dhuumanayay Shabaab oo la helay – Radio Damal
Askeri 17 maalmood ka dhuumanayay Shabaab oo la helay
Xubin ka tirsan koox dhanka ammaanka ah oo loo xil saaray in kooxda Al-Shabaab ay ka sifeeyaan deegaanka Lamu ee dalka Kenya ayaa soo laabtay kaddib 17 maalmood oo la weysanaa xilli uu shaqo ku guda jiray, sida ay ku warantay warbaahinta maxaliga ah.
Sarkaalkan oo lagu magacaabo Norman Mwongera ayaa Arbacadii 2-da June ku laabtay xeradiisa oo ku taalla Lamu kaddib markii uu soo idlaaday haowlgal ay ciidammada gaarka ah ee Kenya ay ay ku baacsanayeen dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab oo ku sugnaa keymo halkaa ku dhaw.
Marka laga reebo Mwongera, toddobada kale ee kooxda ammaanka ka tirsan ayaa weli la la’yahay.
Arbacadii, Mwongera ayaa ku laabtay xerada Basuba GSU abbaaro 9:40 am. Waxaa ku yaallay labo dhaawac oo rasaas ah, mid wuxuu kaga yaallay cajarka halka kan kalena uu gacanta kaga yaallay
“Waxaa loo qaaday isbitaalka si uu daaweyn degdeg ah u helo,” ayuu sarkaal ku sugan xerada Basuba oo aan dooneyn in magaciisa la sheego u sheegay wargeyska maxalliga ah ee Standar
Xubin kale oo ka tirsan kooxda howlgallada gaarka ah, oo aan loo oggoleyn inuu hadlo isagoo kooxda matalaya, ayaa sheegay in Mwongera uu ka tirsanaa toban sarkaal , kuwaas oo ka jawaabayay dalab kaddib markii kooxda Al-Shabaab lagu arkay deegaanka Mangai taariikhdu markii ay ahayd 17-kii May.
“Kooxda ayaa isku dayday inay is difaacaan iyaga oo rasaaseynaya helikobtarteenna. Diyaaradda waxaa lagu qasbanaaday in la dejiyo. Kaddib saraakiisheenna way is qariyeen,” ayuu yiri.
“Nasiib darro, siddeed ayaa la waayay, iyadoo toddobo weli la la’yahay. Keliya Mwongera ayaa soo laabtay,” ayuu yiri.
Weli lama oga sida uu Mwongera keymaha ugu badbaaday 17 maalmood.
Labo xubnood oo kooxda howlgallada gaarka ah ka tirsanaa ayaa ku dhintay intii rasaasta la is weydaarsanayay.